FAQs | Ukulawulwa kwabazali nabaSebenzi beSpyware Monitoring Software
Ikhaya Imibuzo Evame Ukubuzwa
Okuthile okungenangqondo? Uqhubekele ezintweni eziqhamukayo ozithola zididekile? Kukhona i-plethora ongafuna ukwazi ngeTheOneSpy futhi sakhe lesi sigaba se-FAQ ngokuqondene nawe kuphela. Hlola umbuzo ohlukile ukuze ubone ukuthi ungathola yini okufunayo.
Iyini iTheOneSpy futhi ifakiwe kanjani?
Ngiqala kanjani ngeTheOneSpy?
Kulula ukufaka i-TheOneSpy?
Ingabe i-TheOneSpy ifana nanoma iyiphi enye i-spyware emakethe?
Ingabe iTheOneSpy inikeza noma iyiphi incwadi yomsebenzisi engayifundwa ngaphambi kokuthenga ukuqonda ukusebenza komsebenzi?
Ingabe kuncomeka ukuthumela idivaysi eqondisiwe ezindaweni ezikude ezifana nesinye isimo?
Ingabe ikhona enye indlela i-TheOneSpy engayifaka ngaphandle kokufinyelela ifoni ngokomzimba?
Uma ifoni ehlongozwayo ivikelwe iphasiwedi engaziwa, ngingakwazi yini ukufaka i-TheOneSpy? Ingabe ithimba lakho lingangisiza ekulandeleni iphasiwedi ngandlela-thile?
Yimaphi ama-smartphones asekelwa i-TheOneSpy?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukufaka i-TheOneSpy kudivayisi eqondisiwe?
Ingabe kungokomthetho ukufaka i-TheOneSpy?
Impela idatha idluliselwe kusuka kudivayisi eqondisiwe ku-akhawunti yami ye-intanethi?
Ingabe i-TheOneSpy ilayisha kuphela idatha ekhuluma ngesiNgisi?
Ngabe sengaphansi kwemingcele ethile uma kuziwa ekugcineni idatha kwi-akhawunti yami ye-inthanethi ku-TheOneSpy?
I-TheOneSpy ingawusizo ngaziphi izindlela?
Ingabe ifoni kudingeka iqaliswe kabusha emva kokuqedwa kokufakwa?
Ngingaqiniseka kanjani ukuthi idatha yami kwisiphakeli sakho seTheOneSpy igcinwa ngokuphepha?
Ingabe i-TheOneSpy ingafakwa kwi-iPhone engakaze iboshwe ejele kuqala?
Ingabe kudingekile ukuthi idivayisi ye-Android ifakwe kuqala, ukuze ufake i-TheOneSpy?
Ingabe kungokomthetho ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuqapha i-TOS?
Kungenzeka yini ukuqapha amadivaysi amaningi kusuka kwelayisensi eyodwa yeTheOneSpy ngesikhathi esifanayo?
Ini ? Ngemuva kokuthi ngithumele ukubika okubi.
Ngingabhala izingcingo ngeTheOneSpy?
Ngimaphi izithombe engingawabuka efonini nasephilisi zabo?
Yimaphi amafomethi wefayela asekelwa iTheOneSpy yamafayela e-multimedia?
Ingabe i-TOS inikeza noma yiluphi uhlobo lwezaphulelo?
Ngithola noma yiliphi uhlobo lesaphulelo ekuthengeni amalayisense amaningi we-TOS?
Nginesithakazelo ekuthengiseni i-TOS. Ingabe unikeza uhlelo lomthengisi?
Ngidinga isikhathi esingakanani ukulinda i-imeyili eyamukelekile ukuthi itholwe ngemuva kokuthenga?
Ngithola nini ikhodi yami yokuqalisa?
Ukubhaliselwa kwe-TOS yami yonyaka owodwa kuqala nini? Emva kokuthenga ngokwakho noma ngesikhathi sokuqalisa isofthiwe efonini?
Ngingaqala kanjani ukuqala ukuqapha emva kokufakwa nokusebenza kwe-TOS kudivayisi eqondisiwe?
Iyini inqubo yokuqinisekisa i-TheOneSpy?
Ngilindele bani ukusekela ubuchwepheshe, uma kudingeka?
Ziyini amahora wokusekela anwetshwe yi-TOS?
Ngifinyelela kanjani idatha ku-akhawunti yami ye-TOS inthanethi ngemva kokuthenga?
Ngingayithola yini i-akhawunti yami ye-TOS inthanethi kusuka kuthebulethi noma i-smartphone ngaphandle kwe-PC?
Angibonakali ukuthi ngiyajabula ngemisebenzi yeTheOneSpy. Ngithola kanjani imali yokubuyisela imali?
Kuhle. Ngithumele isicelo sokubuyisela imali ku-TOS. Kuzoze kube nini ngilinde ngaphambi kokuba ngibuyisele imali yami?
Akekho obuyele kimi kusukela eqenjini lakho lokusekela noma ngabe ngithumele ithikithi ku-TOS? Okufanele ngikwenze?
Ngingena ngemvume ku-akhawunti yami ngeziqinisekiso ezinikezwe i-TOS kodwa ngokuphindaphindiwe uthole umyalezo wokuthi imininingwane yami ayilungile. Yini engilahlekile?
Ingabe umsebenzisi wefoni angathola iTheOneSpy efonini yabo?
Ingabe igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-akhawunti yami ye-inthanethi iyashintsha?
Ngithenge i-TheOneSpy kodwa angizange ngithole i-e-mail eyamukelekile. Ngiyithola nini?
Ngaki izikhathi idatha elayishwe kusuka efonini elibhekiswe ku-akhawunti yami ye-TOS inthanethi?
Ukubika kwesisulu kungaba kanjani, uma kuqashwe ngokumelene nentando yomuntu siqu?
Kungani i-TheOneSpy ithengisa isicelo ngemithetho eqinile?
Yiziphi izenzakalo? Zivuselelwa kaningi kangakanani?
Kuthiwani uma ngingeke ngilinde ihora? Kuthiwani uma ngifuna ukubuka idatha manje?
I-TheOneSpy ingangisiza yini ukuhlunga ulwazi oluthile ngedatha yami yonke ye-TOS online?
Ingabe ngisebenzisa inguqulo yakamuva ye-TOS? Ngingahlala kanjani ngiqiniseka kangaka?
Iyiphi inqubo eqondile yokushintsha ilayisense yami ye-TOS kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwesinye ikakhulukazi esebenza endaweni yesikhulumi esithile (isib. I-iPhone kuya ku-Android)?
Uma ngifisa ukuthuthukisa iphakethe lami le-TOS, ngingakwenza lokho kude, uma ngingenayo ifoni ngokwayo?
Kungani lesi sigaba se-FAQ sasiyinde kakhulu futhi siningi?
I-TheOnespy izosisiza kanjani?
I-imeyili eyamukelekile ayiqukethe isixhumanisi sokulanda ukufaka i-TheOneSpy. Ingabe lokhu kusho ukuthi i-imeyili iyisihluku?
Izinto ziqhubeka kanjani ngithenge iTheOneSpy?
Kwenzekani uma ifoni ehlongozwayo iphuka noma ingonakaliswe ngandlela-thile?
Kungenzeka yini ukulalela ukuhlala amakholi wefoni neTheOneSpy?
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuhlala usesikhathini nezindaba zakamuva mayelana neTheOneSpy?
Kwenzekani uma ilitshe lishintsha ikhadi lakhe le-SIM? Ingabe kufanele ngiyibuyisele efonini?
Ngenza kanjani ukukhokha ngokuthenga i-TheOneSpy?
Uma ngithenga iTheOneSpy, ingabe izobonisa esitatimendeni sami sekhadi lesikweletu?
Ingabe i-TheOneSpy Yokunikezwa Kokuphepha Kwokukhokha Oku-inthanethi?
Kungani ngidinga ikhodi ye-3D ukuqedela ukuthengwa kokuthenga?
Kungani ngilahlekelwa ezinye zemiyalezo yombhalo we-SMS kuDashibhodi njengoba ngingabona leyo milayezo eselula kodwa hhayi kwi-Logs SMS?
Ukuphepha kwe-3D Kugwema kanjani ukuthengiswa okungagunyaziwe?
Kungani kufanele ngithembele kuwe?
Ingabe nina madoda niyigugu uma kuqhathaniswa nomncintiswano wakho?
Ngithenga kanjani uhlelo lokusebenza kusuka kuwe?
Kulungile ngakho ngithengile iTheOneSpy, manje yini?
Nginolwazi oluncane kakhulu lwe-tech. Kuthiwani uma ngilahla okuthile?
Ngisebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza emva kokufakwa?
Ngithole ilayisense kodwa ayikho i-imeyili eyamukelekile noma imiyalo?
Ngingashintsha amafoni ngaphansi kwelayisensi efanayo?
Ingabe kunomthelela ekusebenzeni kwebhethri njengoba uhlelo lokusebenza lufakiwe?
Yini okufanele ngiyenze uma amafayela ami egijimi engabuyekezi?
I-TheneneSpy isofthiwe yokuqapha eyikude ongayifaka kwi-smartphone noma ithebhulethi ethintekayo yomuntu ukuze uhlole imisebenzi yabo. Lokhu kungenziwa nge-portal inthanethi esinikezwe thina kubhalisile bethu. Konke okudingayo ukuthola ulwazi kuyisistimu esebenzayo futhi uxhumano lwe-intanethi oluzinzile. Ngaphezu kwalokho, ungafaka lesi softhiwe kwi-smartphone yakho ukuze uvuselele idatha yakho yefoni futhi uqaphele imisebenzi efonini yakho ngezikhathi zokudinga njengokweba noma inyane elibi elizama ukusebenzisa kabi ifoni yakho.
Konke okudingekayo yizinyathelo ezintathu ezilula ukuze uthole i-TheOneSpy iphinde isebenze!
Thola ukubamba kwe-smartphone ehlosiwe.
Faka futhi usebenze iTheOneSpy efonini.
Ngena ku-akhawunti yakho ye-intanethi ukubuka imininingwane ephelele yedatha yefoni.
Uma usithenge umkhiqizo, konke okudingeka uqalise ukuthola i-target target esandleni sakho. Kodwa ngaphambi kwalokho udinga ukuthola izimpawu ezithunyelwe yinkampani kwi-akhawunti yakho ye-intanethi. Akungasho ukuthi udinga ikhompyutha (noma iyiphi uhlelo olusebenzayo) kanye nokuxhumana kwe-intanethi ukufeza lokho. Igama lomsebenzisi elifanayo nephasiwedi lizosetshenziswa ngokuhamba kwesikhathi ukufaka isofthiwe kudivayisi eqondisiwe.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi idivayisi ehlolwe kufanele ihambisane nezidingo ze-TOS futhi kufanele ihlinzekwe uxhumano lwe-inthanethi ngaso sonke isikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi i-TheOneSpy ayisebenzi kumakhalekhukhwini ngaphandle kwama-smartphone noma i-smartphone engenakho uxhumano lwe-intanethi noma leyo engagcwalisi izidingo zayo zokusebenza. Kuyadingeka ukuthi i-iPhone ibe yinkinga ye-jailbroken kodwa uma ifika kudivayisi ye-Android; isofthiwe isebenza kokubili okugxilile kanye namadivayisi angaxhunyiwe. Isofthiwe nayo ihluleka ukusebenza ama-Smartphone namaphilisi asebenza ngenguqulo ye-OS engahambisani.
Ukufaka i-TheOneSpy kulula kakhulu futhi kulula, njenganoma iyiphi enye uhlelo lokusebenza olulanda futhi olufake kumafoni akho namaphilisi. Akusho ukuthi ku-Android, kodwa uma i-iPhone yakho ingagcini okwamanje, kungathatha isisombululo sobuchwepheshe bokufeza lokho. Uma udinga noma yiluphi usizo lobuchwepheshe, ungahlala uxhumane neqembu lethu lokusekela elisekhona ukukusiza i-24 / 7.
Cha, akunjalo. Leli phuzu, kodwa lidinga ukucaciswa okuncane. I-Spyware, ngencazelo, yinoma yiluphi uhlelo olungasungulwa kude ngaphandle kokungenelela komuntu. I-TheOneSpy noma kunjalo idinga ukuthi idivayisi ifinyelelwe ngokomzimba futhi ifakwe ngesandla. Akukhona lokho kuphela, kusebenza ngokuvumelana nayo yonke isofthiwe esinayo i-antivirus, ngokungafani ne-spyware engena ezinkambisweni zethu kumafomu e-viral futhi ibanjwa futhi itholwe ngezinhlelo ze-antiviral. Lokhu kubeka nokuthi kungenzeka ukuthi i-TheOneSpy iyinhloli ye-spyware njengoba engakaze ibonwe futhi ibonakaliswe kanye nangemva kokusebenza.
I-TheOneSpy inikeza i-wizard ehlakaniphile yokufaka efolini lakho lokulawula inthanethi elikuthatha isinyathelo ngesinyathelo ngokusebenzisa yonke inqubo yokufaka. Lokhu kuqeda isidingo samanye amabhuku okumele anikezwe esidlangalaleni. Noma kunjalo, uma unemibuzo ehlobene nomkhiqizo noma udinga usizo oluthe xaxa ngenqubo yokufaka, inothi lethu eliphezulu kanye neqembu lokusekela kwamakhasimende lihlale likhona ukuze likuqondise futhi likusize nganoma iyiphi indlela engayenza ngayo.
Once efakiwe, ukuthuthukiswa okuqhubekayo nokugcinwa kwesofthiwe kudinga ukungenelela komuntu. Lokhu kusho ukuthi izinguqulo ezintsha zesofthiwe azithuthukiswa ngokuzenzekelayo futhi zidinga ukuthi idivayisi ifinyelelwe ngokomzimba (Ngaphandle Kwezinye izinhlobo zesefomethi esekelwe). Ngakho ukuthumela idivaysi kwelitshe ezindaweni ezikude ngokuqinisekile akunconywa.
Ngeshwa akunjalo. Ayikho indlela ehamba ngayo. Enye yezinto ezidingekayo zokufaka lolu hlelo lokusebenza ukutholakala ngokomzimba kudivayisi ngokwayo. Uma ubukeka ngokujulile, empeleni kugcina ubumfihlo futhi kuvimbela ukungadingekile kokuzama ukungena ezindabeni zabanye njengokufaka kudivayisi yakho yomakhelwane, nje ngenxa yelukuluku, kungaba yisenzo esingathí sina nokuziphatha okubi. Ukufuna ukufinyeleleka ngokomzimba kudivayisi kukhishwa amathuba anjalo angavamile futhi kugcina kungasebenzi kabi.
Impendulo imane nje cha. Futhi angeke sikusize ekunciphiseni amaphasiwedi, futhi awukwazi ukufaka i-TheOneSpy ngaphandle kokuvula ilokhi kudivayisi ngokwayo.
Manje i-TheOneSpy isekela ama-Smartphones alandelayo nezinhlelo zokusebenza:
BlackBerry - Kumelwe usebenze i-OS 5.x - i-7.1 kuphela futhi ingavaliwe ngephasikhodi
iPhone - Kumelwe iqhube iOS 6.x - 8.0 engahle iboshwe futhi ayivalelwe iphasikhodi
Android - Kumelwe usebenze i-Android OS 2.3.6 - 5.1.1 - 6.1 - 7.0 futhi hhayi ekhiywe ngephasikhodi
Uhlelo lokusebenza lwe-TheneneSpy alukwazi ukusekela i-Smartphones ye-China namadivayisi amaphilisi; ngisho bephethe amaphuzu we-OS okukhulunywe ngenhla.
Kuncike ekusebenzeni komuntu ukufaka isicelo nesimo sefoni esicatshangelwayo, izikhathi zingashintsha kodwa ngokuvamile akudingi ngaphezu kwemizuzu ye-3-5 ukufaka isofthiwe kunoma iyiphi idivayisi ehambisanayo.
Uma kuziwa ekufakeni isofthiwe efonini yakho, njengesixazululo sokusekela, wena uyinhloko yezinqumo zakho. Noma kunjalo, uma uhlose ukuyifaka kwidivayisi yomunye umuntu, kuyisiko ukuthi ufuna imvume yabo noma okungenani uthole imvume kubo ngaphambi kokuqhubeka. Uma ufuna ukuqinisekiswa okuqhubekayo, ungakwazi njalo ukubhekisela emithethweni yezwe lakho noma ufunde ukuvikelwa komthetho wethu, ngoba sisebenzisa inqubo yokuqinisekisa ngemuva kokufaka.
Ukuze idatha idluliselwe kusuka kudivayisi kuya kuphaneli yakho yokulawula yangasese, kubalulekile ukuthi idivayisi ixhaswe yi-intanethi eqinile ye-intanethi esebenza ngokungenasici futhi ivuliwe ngaso sonke isikhathi. Lokhu kungase kube nge-Wi Fi (uma nje ifoni ingaphakathi kwesignali), i-3G noma i-GPRS.
Kumele uqaphele kodwa ukuthi amafoni anokuxhumana okusheshayo kwe-intanethi angabhekana nokulibaziseka ekulayisheni kwedatha kumafayili jikelele kanye nemidiya njengezithombe, ama-audios namavidiyo ku-akhawunti ye-intanethi. Ngaphezu kwalokho, Uma kunoma yisiphi isikhathi, ifoni ilahlekelwa ukuxhumana kwayo kwe-intanethi ngokuphelele, njengoba kunjalo uma ifoni ingekho ebangeni lesignali noma i-intanethi ivaliwe (imodi yendiza), i-TheOneSpy izoqhubeka nokuqoqa nokugcina idatha njengokujwayelekile, kuphela ukulayishwa ku-akhawunti yakho ye-intanethi uma uxhumano kwi-intanethi libuyiselwa.
Ngenhlanhla, cha. I-TheOneSpy iyi-software yokuqapha yezilimi eziningi ezithatha futhi ilayishe idatha kuzo zonke izilimi namafomu azo okuqala. Akunandaba ukuthi ingxoxo eqoshiwe yayise-Arabhu noma i-SMS yayikhuluma ngesiShayina. TheOneSpy ngeke ishintshe kancane yayo. Izolayisha konke njengoba kunjalo.
I-TOS okwamanje inikeza amandla okugcina idatha we-500 GB kodwa inganwetshwa njengezidingo zomsebenzisi. Kumele kuqashelwe ukuthi amaphakheji aphezulu we-TOS afana ne-Xtream noNdunankulu afika ngamakhono okugcina esakhelwe ngaphakathi ekuphakanyeni kakhulu kunabaningi bawo, Sisebenza kuphela izinsuku ze-45 idatha ekupheleni kwethu.
I-TheneneSpy ingasiza ekudaluleni izinto namaqiniso angenakubuzwa ngokuqondile ngezikhathi ezithile. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuveza umlingani wakho wokukopela, ngokucophelela ukuqapha ingane yakho ekhulayo noma ukwenza u-espionage yezinkampani, I-TheOneSpy ingakusiza ukuba ufeze cishe yonke into ongayifisa. Yini enye? Ngeke ugcine kuphela abathandekayo bakho bephephile kodwa futhi udale isipele ngemininingwane yakho ngokufaka isicelo kudivayisi yakho. Ukusetshenziswa kwalo kubandakanya kuze kube sekucabangeni kwakho kungakusiza. Nazi ezinye izibonelo zokuphila zangempela zendlela i-TheOneSpy engenza ngayo izinto zibe lula kakhulu kithi:
Omama bangabheka izingane zabo ngokubeka idivayisi ehlolwe eduze nabo ebusuku noma uma benabantwana.
Ama-ejensi okuphoqelela umthetho angaphishekela abasolwa futhi athole ubufakazi obubhekiswe kubo. Ngaphezu kwalokho izigebengu ezikhishwe ngebheyili zingalandelwa ukubona ukuthi zikhona yini izinguquko ezinhle ekuziphatheni.
Abahlengikazi bangakwazi ukuqapha umsebenzi weziguli ezibucayi kakhulu 24 / 7 kanye nokulandelela izindawo zeziguli asebekhulile ukuhlola ukuphepha nokuphila kwabo.
Amadoda asetshenziselwa amasosha anganikeza amadivaysi nale software efakwe kumalungu omndeni ukuze ahlole ukuphepha kwabo ngaso sonke isikhathi.
Ukuqala kabusha kungadingeka uma ifoni i-Symbian Anna noma i-Belle esekelwe efonini. Uma ufisa ukufihla isithonjana se-super SU esivela ngesikhathi sokufakwa, ukuphefumula kubaluleke kakhulu kuwo wonke ama-iPhones nakwamanye amafoni we-Android axhunyiwe. Okunikezwe ngezansi ukubuyiswa okufushane.
Ku-iPhone, ukuqala kabusha (ukuphefumula) kuyadingeka emva kokuqedwa kokufakwa
Ku-Android, uma ukhetha ukufihla isithonjana se-SuperSU, khona-ke ukuqala kabusha kuyadingeka kwamanye amadivayisi asuselwe.
I-Blackberry ayikho kabusha kabusha okudingekayo.
Okokuqala, umsebenzisi ngamunye unikezwa igama lomsebenzisi eliphephile nephasiwedi okungekho omunye umuntu ongakwazi ukufinyelela kuwo. Okwesibili. I-akhawunti ye-intanethi isebenzisa ukubethela kwe-AES / PKI kanye ne-HTTPS Ukubethela okuqinisekisa ukuphepha okuphelele kwedatha yakho ye-inthanethi.
Cha. Siyayeka ukuthengisa uhlelo lokusebenza lweJail break for iPhone, kodwa esikhathini esizayo sinecebo lokuqalisa iOS Parental Monitoring Solution ngokusebenzisa i-Apple ID, ngokuqinisekiswa okuphezulu.
I-TheOneSpy inikeza izinhlobo ezimbili zesiphequluli sohlelo lokusebenza, eyodwa isuselwe inguqulo futhi eyesibili inguqulo engasusiwe.
I-Rooted version inikeza amandla abasebenzisi ukusebenzisa zonke izici ezinqunyelwe uhlelo lokusebenza lokuqapha i-TheOneSpy, kodwa idivayisi idinga ukuxoshwa kuqala. Uma ngabe umsebenzisi engafuni ukuxuba idivayisi yakhe khona-ke uzokwazi ukusebenzisa izici ezingaxilwanga kuphela. Izici ezigxilile kuzo zonke izinhlelo zokusebenza zomphakathi ze-IM / izinhlelo zokuthumela imiyalezo esheshayo njenge-WhatsApp, Facebook, Tinder, Line, Yahoo nabanye abaningi. Uhlelo lokusebenza lweNkulumbuso lweTheOneSpy liqukethe zonke izici ezinqotshwe futhi ezingasuswa. Ukuhlola izici ezigxilile nezingaxoshiwe vakashela i- Izici ezijwayelekile Page
Inguqulo yeNdunankulu yigama lomphakathi Uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy lugxilile. Uma umsebenzisi ethanda ukuthenga le nguqulo eyinhloko ke yena angasebenzisa zonke izici ezinqotshwe uma idivayisi ye-Android ehlosiwe igxilwe ngenye indlela ingase isebenzise izici ezingenqatshelwe.
Inguqulo engagxiliwe izosekela kuphela izici ezingaxhunyiwe ezinjenge-spy kwisici semiyalezo efaka imiyalezo yombhalo, izingodo zekholi, uhlu loxhumana nabo, amabhukumaka nomlando wokuphequlula. Landelela izici zendawo ye-GPS kanye ne-GPS indawo tracker, buka umlando wendawo yabo, buka indawo yamanje ne-GPS. Ukuqokwa, amakhalenda, isaziso sezinguquko ze-Sim njll. Un-Rooted Version yeTheOneSpy etholakalayo emaphaketheni e-Lite ne-X-Lite. Ingakwazi ukufaka kuwo wonke amadivaysi e-Android ahlobene nokungaxhunyiwe futhi ingathola amalogi wawo wonke idatha static.
Yebo, kungokomthetho ukusebenzisa i-TheOneSpy. Isicelo sokuqapha i-TOS sakhiwe futhi senzelwe ngokucophelela ukusekela abazali, abaqaphi nabaqashi ukugcina izingane zabo zivikelekile futhi izisebenzi zikhiqize. Uhlelo lokusebenza lwe-TOS luvumela umsebenzisi walo ukuba enze isithonjana sohlelo lokusebenza sibonakale noma sifihliwe kudivayisi ehlosiwe ngemuva kokuqedela ukufakwa okukwenza kube yinkinga yokuthembela yomsebenzisi emhlabeni jikelele.
Ilayisensi ye-akhawunti eyodwa ikuvumela ukuthi uphishekele okuhloswe okukodwa. Ngakho-ke, kusobala ukuthi uma ufuna ukuqapha abangaphezu komuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa, uzodinga amalayisense amaningi ngalokho. Noma kunjalo, izindaba ezinhle ukuthi i-TheOneSpy, enezinkinobho zayo zokushintshwa kwedivayisi elingenamkhawulo, ikuvumela ukuqapha umsolwa oyedwa kuwo wonke amadivaysi amaningi. Lokhu kusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi leli cala lizama kangakanani ukukukhipha ngaphandle ngokushintsha ngokuphindaphindiwe kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwesinye; ungahlala kulo futhi usebenzise ilayisensi eyodwa. Esikhathini sokushintsha umshini, umbhalisi uzositshela futhi angalanda inguqulo ehambisanayo ngokuhambisana nokusebenza kwedivaysi.
Uma sithola idivayisi yakho ye-IMEI noma inombolo yocingo ngenombolo yakho yeselula ehlinzekiwe kumarekhodi ethu, khona-ke siyasimisa ngokushesha ilayisense futhi sikutshele, nge-imeyili ngolwazi oluphelele lomthengi kanye nedatha yedatha esikutholile ngesikhathi sokuthenga nokuqinisekisa, sicela uqaphele amarekhodi ethu anikeziwe akusiza kuphela ukuphenywa okuqhubekayo kanye nama-ejensi okuphoqelela umthetho futhi asibheki icala lokuhlukunyezwa kwekhaya.
Yebo. Shayela isici sokurekhoda senzelwe i-Xtream ne-Premier iphakheji ye-TheOneSpy. Lokhu kuqinisile kumadivayisi we-Android kuphela. Konke okudingeka ukwenze ukunika amandla isici sokuqopha ucingo kusuka kudeshibhodi yakho e-intanethi. Uma isebenze, zonke izingcingo zizorekhodwa ngokuzenzekelayo futhi zilayishwe ku-akhawunti yakho ye-intanethi, lapho ungabalalela khona kalula.
Ungabuka ububanzi bezithombe kuhlanganise nalabo abathathwa yidivayisi ngokwalo, bathunyelwe nge-MMS noma balayishiwe ngokusebenzisa i-intanethi. Awukwazi ukubuka kuphela izithombe ezithathwe ngemva kokufakwa kwesofthiwe kodwa nanoma yikuphi okudlule, usebenzisa isici se-Historical Media. Izithombe ezibekwe njengephepha lokudonga kwesikrini sasekhaya nazo zingabonwa.
I-TheneneSpy ithatha amafomethi alandelayo wezithombe namafayela alalelwayo-video kusuka efonini elihlosiwe futhi ulilayisha ku-akhawunti yakho ye-intanethi.
Izithombe: JPEG, GIF, BMP, EXIF, TIFF, RAW, PNG, PPM, PGM, PBM, PNM, ECW
Amavidiyo: I-CGM, i-SVG, i-ODG, i-EPS, i-PDF, i-SWF, i-WMF, i-XPS, i-EMF, i-EMF, i-EMZ, i-MP4, i-WMV, i-ASF, i-3GP, i-3G2, i-M4v, i-AVI
Asilondolozi izaphulelo eziqhubekayo kumkhiqizo wethu; Kodwa noma yikuphi ukukhushulwa kwamanje kuboniswa ngesibindi ekhasini lethu lasekhaya ku-http: //www.TheOneSpy.com
Kukhona okunye okungafani nomthetho, noma kunjalo. Sinikeza isaphulelo sevolumu ekuthengeni kwamalayisense amaningi. Kodwa ukuze uthole isaphulelo, ikhasimende yena uqobo kumele asitshele ngokushesha ngaphambi kokuthi acele ukuthenga amalayisense ngobuningi.
Ekuthengeni kwamalayisensi amaningi ngesikhathi esisodwa noma ngaphakathi, ufanelekela uhlelo lwethu lokunciphisa isamba. Ukuze uthole lesi Saphulelo, udinga ukuhambisa nje ithikithi lokusekela kithi kuwebhusayithi yethu kanye nemininingwane yamalayisensi athengiwe. Lokhu kuzosinika indawo yokuhlola wonke amadivaysi ekuvumelanisa bese senza isaphulelo sevolumu esekelwe kwinombolo yamafoni ahambisanayo.
Cha, Siyeka uhlelo lobulungu kusuka ku-1st January, 2018. Ngenxa yokugqugquzelwa okungemthetho kusuka kubambisene abahlukahlukene bemikhiqizo yethu.
Uma kwenzeka ikheli le-imeyili elinikeziwe livumelekile, kufanele ulindele i-imeyili eyamukelekile kungakapheli amaminithi okuthenga kwakho. Ungakhohlwa ukuhlola ifolda engadingeki / ogaxekile ngezinye izikhathi, i-imeyili ingathunyelwa kule folda.
Uzothola ikhodi yokuqalisa esiteji sayo esithile ngesikhathi senqubo yokufaka. Uma ubambe idivayisi futhi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho kusuka lapho, i-wizard yokufaka iyokuqondisa ngenqubo yokufaka. Ikhodi yokusebenza izovela endaweni yayo ekhethiwe ngesikhathi senqubo.
Ukuthenga kwakho konyaka owodwa kuqala ngokushesha ngemva kokuthengwa komkhiqizo. Ukuze sisebenzise ngokugcwele inqubomgomo yethu yokubuyiselwa kwesikhashana se-3 futhi senze okuningi kakhulu ekuthengeni kwakho, sincoma ukuthi usebenze lolu hlelo kudivayisi eqondisiwe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Uma isofthiwe efakwe ngempumelelo futhi isebenze kudivayisi eqondisiwe, mane ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-inthanethi kusuka kunoma iyiphi isistimu efana nekhompiyutha ukusetha izintandokazi zakho ngezici ongathanda ukuyisebenzisa.
Sifuna, Umthengi Igama eliphelele, Ikheli, Inombolo yocingo, Umsebenzisi ogxile, igama lohlobo, ubudala, futhi elibhekiswe kumakhalekhukhwini, emva kwalokho sizoqinisekisa kokubili inombolo yocingo yocingo ngekhodi ye-SMS noma ukubiza okuqondile abantu ukuthi bazi ukuthi uyavuma noma uzimisele ukufaka lolu hlelo lokusebenza.
Uma singatholi ukuqinisekiswa yizinsuku ze-5, khona-ke sizomisa ilayisense futhi sixhumane nomsebenzisi we-Target ukuphenya ngokuqhubekayo.
Ithimba lethu lokusekela ikhasimende lethu elihle kakhulu litholakala ukukusiza ujikeleze iwashi. Uma udinga noma yikuphi usizo lobuchwepheshe, mane uchofoze inkinobho yengxoxo ukuze uhlale ingxoxo namalungu ethu weqembu lokusekela noma cindezela inkinobho yosizo ukushiya umyalezo wethimba lethu futhi ngokuqinisekile bayobuyela kuwe. Ungasithumela futhi ithikithi lokusekela nge Ukunakekelwa kwamakhasimende
Ukusekelwa kwe-TOS itholakale i-24 / 7 inikeza ukusekelwa kwama-presales ngezingxoxo bukhoma futhi ukusekela kwezobuchwepheshe
Uma uthola i-imeyili eyamukelekile esuka ku-TOS, izoqukatha ulwazi olulandelayo:
I-URL yokungena ngemvume yeDashibhodi: Cp.theonespy.com
Igama lomsebenzisi: Test.Tester101
Ikhodi Yokuqalisa: ## 125 ****
Ukusebenzisa idivayisi yakho yekhompuyutha / Smart kanye nemininingwane enikeziwe ungangena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-intanethi kusuka kudivayisi eqondisiwe bese uhamba nokufakwa.
Yebo, uhlelo lokusebenza lusebenza kahle ngokufanayo kuthebhulethi noma i-smartphone njenge-PC.
Izinqubomgomo zethu zokubuyiselwa kwemikhiqizo ehlukene ziyahlukahluka ngokwemigomo yokubhalisa ngesikhathi sokuthenga. Kunconywa ukuba ufunde ngokucophelela futhi uqonde inqubomgomo yomkhiqizo owathengiwe ukuze uqaphele ngokuphelele ukufaneleka kwakho ukubuyiselwa imali kanye namalungelo akho okubuyisela imali.
Ngaphezu kwalokho, ungaphinda ulahle ithikithi lokusekela elicela ukubuyiselwa imali, uma nje lihambisana nemigomo nemibandela echazwe kwinqubomgomo yethu yokubuyisela imali.
Siyacubungula zonke izicelo zakho bese uphendula imibuzo yakho ngaphakathi kwe-24hours yokuwamukela. Noma kunjalo, kungase kuthathe isonto ukuthi imali kubuyiselwe kuwe, ngenxa yokulibaziseka ekuqhubekeni ekupheleni kwebhange.
Kungathatha cishe usuku ukuze amalungu ethu amathimba aphendule amathikithi akho. Sizama ukuphendula ekuqaleni kodwana ngezindaba zobuchwepheshe ezidinga ukuqonda okukhulu nokuxazulula izinkinga, kungathatha isikhathi eside. Ngakho-ke kungadingeka ulinde isikhathi eside njengoba sisebenzisana neqembu lethu lokuthuthukiswa ukuxazulula noma yiliphi i-bogglers yengqondo. Noma kunjalo, ithimba lethu lizobuyela kuwe, ngokushesha noma ngokuhamba kwesikhathi, futhi lihlale likufundile ngesimo.
Iphutha elivamile abasebenzisi abaningi abakwenzayo, ukuthi bayakhohlwa ukufaka isiqalo 'umsebenzisi' lapho befaka igama lomsebenzisi wabo
Isibonelo uma igama lakho lomsebenzisi lingumsebenzisi123456 futhi iphasiwedi yakho yayingu-xyz futhi uzame ukungena njengo-123456 no-xyz ngeke isebenze.
Qaphela: Amagama womsebenzisi namaphasiwedi azwela ubugebengu ngakho-ke sicela uqiniseke ukuthi ikhi lakho le-Caps Lock alivuliwe ngoba lingalalela iphutha ngegama lomsebenzisi elifakelwe noma iphasiwedi.
Inguqulo yethu ekhona, ibonakala ngokugcwele kumsebenzisi okhomba, umgomo womsebenzisi ungathola isithonjana sethu sohlelo lokusebenza kubha yomsebenzi kanye nokuthola uhlelo lwethu lokusebenza kumphathi wezinhlelo zokusebenza, uma abazali noma umqashi bafuna inguqulo ehlakaniphile yohlelo lwethu ukuze sivikele ngokugcwele, khona-ke umthengi kudingeka agcwalise inqubo yethu yokuqinisekisa.
Ngokuqinisekile! Uma ungene ngemvume ungena kalula ithebhu ye-Akhawunti futhi ungashintsha igama lomsebenzisi nephasiwedi kusuka kulowo menyu.
Imeyili eyamukelekile iya ekheli le-imeyili olifaka ngesikhathi sokuthenga. Udinga ukuqinisekisa ukuthi awuzange uphephe noma yini ekheli lakho le-imeyili, njengoba kungenzeka njalo. Uma uqinisekile ukuthi uthayiphe i-id engalungile ye-imeyli, ungakhohlwa ukuhlola ifolda yakho engenasidingo njengoba i-imeyili kungenzeka ingene ngengozi. Ukuze uthole olunye usizo, xhumana neqembu lethu lokusekela.
Ukulayishwa kwedatha kuyinkqubo eqhubekayo, kodwa ingahle ilungiswe ukuhambisana nezidingo zakho. Ungakhetha ukubuyekezwa okusheshayo njengoba kwenzeka okwenzekayo, uma isikhathi senzeka yilokho okubaluleke kakhulu. Uma kwenzeka ufuna ukugcina impilo yakho yebhethri, ungasetha isikhathi esifanele sokulethwa kwedatha, asho njalo ihora ukuya kanye ngosuku. Ngokuzenzakalelayo, idatha ihanjiswa ngokuzenzekelayo njengoba kwenzeka umcimbi ngamunye noma ihora ngalinye, uma idivayisi eqondisiwe inesidingo sokusebenza kwe-intanethi. Okufanayo kubambelele ekulandeleni indawo okuvunyelwe ngokufana nokufakwa futhi kulayishwa njalo emaminithini we-20.
Uma-ke uma amadivaysi akho eqashwe ngumuntu osebenzisa isofthiwe yeTheOneSpy ngaphandle kokuthatha imvume yakho, ungabika ukuhlukunyezwa / ukuhlukunyezwa ngezansi kwesixhumanisi futhi nje udinga ukunikeza ulwazi olubalulekile.
Bika Ukuhlukunyezwa Nokuhlukunyezwa
Ukuhlukunyezwa kwe-Cyber ​​kanye nemisebenzi elandelanayo iwela ngaphansi kobugebengu be-cyber obulimaza izisulu ngokomzwelo, ngokwengqondo nangokomzimba. Yingakho i-TheOneSpy ibilokhu ibe yinkimbinkimbi ngokumelene nemisebenzi emibi eyenziwa yizilwane ezidalwa yi-intanethi futhi ithuthukise amathuluzi okuvikela izingane nokusiza abazali ukuba benze ukubeletha kwe-digital.
Noma yimuphi umsebenzi okwenzeka phezu kwefoni ubizwa ngokuthi umcimbi. Isibonelo isibalo esisodwa se-SMS noma esisodwa se-GPS singacatshangwa njengomcimbi owodwa. Ngokuzenzakalelayo, isofthiwe ilayisha idatha ngemuva komcimbi ngamunye noma ama-15 Amaminithi. kwaphela uma kwenzeka kungekho mcimbi okwenzekayo. Ngale ndlela, idatha ethunjiwe kusuka efonini eqondisiwe ingalandwa njalo futhi ngempumelelo.
Ngokuqinisekile siyahlonipha ukukhathazeka kwakho. Ungaguqula njalo izilungiselelo zokulayisha idatha kusuka ku-akhawunti yakho ye-intanethi ukuze uvumelane nezidingo zakho. Vele ungene ngemvume kudeshibhodi yakho e-intanethi bese uya kuzilungiselelo> Shintsha ukubeka okufakiwe> Thumela bese yonke imininingo ethunjiwe izolayishwa ngokushesha. Kodwa ugcine engqondweni ukuthi amafayela e-multimedia afana nezithombe, ama-audios namavidiyo anokwesayizi enkulu yefayela futhi ngenxa yalokho akwazi ukulibaziseka ukulayishwa. Ngokufanayo uma uthumela umyalo kusuka kwipaneli yakho yokulawula kuya kudivayisi eqondisiwe, kuzothatha cishe ihora elilodwa ukuze kusetshenziswe, njengamasethingi okuzenzakalelayo.
I-TheOneSpy iyaqaphela ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi uthole ulwazi ngokushesha, ngezikhathi ezithile. Ngakho, ngokuqinisekile lokho kugcinwe engqondweni lapho uhlela isicelo.Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-intanethi bese uchofoza inkinobho yokusesha okuphambili ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Unganciphisa usesho lwakho ngokukhetha igama elingukhiye elicacile futhi ucacise ibanga ledethi onethemba lokuthola ulwazi olufunayo. Akusekho isikhathi sokuchitha isikhathi esivela ekhasini eliya kwesinye. I-wizard yokusesha ikwazi ukuhlola ngokuzenzakalelayo ngamakholi wefoni, i-SMS, i-imeyili, i-MMS, amawebhusayithi, amanothi kanye nemilayezo esheshayo, ikulethela imiphumela enembile njalo njalo.
Ukuze uthole inombolo yamuva yenguqulo ye-TOS nohlu lwezinguquko kumkhiqizo, vele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-intanethi bese uchofoza ithebhu yosizo> Ama-Reference Reference> Umlando Wezinguqulo.
Ukuze ubuke ukuthi iyiphi i-software yesofthiwe okwamanje egijima, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-inthanethi bese uchofoza ithebhu yephrofayela. Uzobe usubona ikholomu ekhonjisiwe Yomkhiqizo futhi inombolo yenguqulo izofakwa ohlwini.
Ukuze uzuze ukusebenza okuhle futhi uzuze izici ezintsha nokuthuthukiswa kwesofthiwe, sincoma njalo ukuthi usebenzise inguqulo yakamuva ye-TOS.
Inqubo yokushintsha phakathi kwamapulatifomu ahlukene elula futhi enomusa ku-TOS. Vele ungene ngemvume ku-intanethi yakho ye-intanethi bese uchofoze ithebhu yosizo> Izincwadi Zokukhokha> Ukucima Ukwenza nokukhipha futhi uthumele umyalo kwifoni eqondisiwe ukuze kusebenze ukulandelwa kulandelwe ukukhipha.
Uma lokhu sekuqedile, kusho ukuthi wonke umlando ususiwe futhi ufanelekile ukuthatha isiqalo esisha. Thatha idivayisi entsha bese ungena ku-akhawunti yakho ye-inthanethi kusuka lapho. I-wididi yokufaka izovela futhi ikuqondise ngezinyathelo zokufaka, kuphela ukuthi uzobe ukhetha ipulatifomu entsha yedivayisi yakho manje. Ungakhetha ukushintsha amapulatifomu, okusheshayo futhi kulula, izikhathi eziningi ozifisayo, ngaphansi kwelayisense ye-TOS eyodwa. Into kuphela okudingeka uqiniseke ngayo ukuthi idivayisi entsha igcwalisa izidingo ezibalulekile ze-TOS ngaphambi kokuqhubeka.
Ukugcina lula kwakho engqondweni, U-TOS ngowokuqala ukwethula ukuthuthukiswa komkhiqizo kude.
Konke okudingeka ukwenze ukungena ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-intanethi uphinde uthuthele kwimenyu YOKUHUSA. Lapho ungathatha imiyalo mayelana nokuthuthukisa futhi wenze inkokhelo yepulani elisha lephakethe. Uma ukukhokha sekuqinisekisiwe, isofthiwe izovuselelwa ngokuzenzakalelayo.
Funda kude kangaka? Bravo! Ufunde cishe konke okudingeka ukwazi nge-TOS. Ufuna ukwazi ukuthi kungani senze lokho kakhulu? Ngokuyinhloko, sifuna ukususa ukungaboni kahle nokuncintisana engqondweni yabafundi bethu. Sifuna amakhasimende ethu ukuba nolwazi olunzulu ngomkhiqizo wethu ukuze bakwazi ukuwuthola kakhulu. Sifisa ukuvuleka ngokuphelele futhi sibala mayelana nomkhiqizo wethu, ngokungafani nabompikiswano bethu abaphumelela ekwenzeni umbukiso omkhulu wemikhiqizo yabo kodwa behluleka ukuletha imiphumela. Sifuna ujabule ngokugcwele ngomkhiqizo wethu futhi uncoma kubangani nomndeni futhi! Yilo mbono osisize kakhulu ekuphumeni kwabanye futhi sinikeza isofthiwe ephelele kunazo zonke yokuqapha smartphone emakethe namuhla.
Lolu hlelo lokusebenza lungakusiza ukuba uhlele amanga bese uthola iqiniso. Kungakhathaliseki ukuthi ungumzali ozama ukuthola ukuthi ngabe ingane yakhe ayifanele yini, noma umqashi ozama ukuqinisekisa ukuthi izimfihlo zenkampani azihambisani nabasebenzi - I-TheneneSpy ingakubonisa isithombe sangempela.
Cha, i-imeyili ayiyona inkinga. Asithumeli isixhumanisi sokulanda ku-imeyili yethu eyamukelekile nanoma yikuphi ukuxhumana kumbhalo womsebenzisi noma ezinye izingxenye zewebsite yethu. Lokhu kungenxa yokuthi akudingeki khona lapho. Uma usuphethe idivayisi kanye neziqinisekiso ebuchosheni bakho, konke okudingayo ukungena ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-intanethi bese uvumela i-wizard yokufaka ikuqondise inqubo yokufaka. Lokhu kufaka phakathi iziyalezo ezihlobene nokulanda kanye nokufakwa kwesofthiwe.
Uma usuqedile ngempumelelo ukuthenga kwakho futhi ufaka ikheli le-imeyili elilungile, uzothola i-imeyili eyamukelekile esuka ku-TOS equkethe imininingwane ngokuphathelene neziqinisekiso zakho. Izimpawu, kufaka phakathi igama lomsebenzisi nephasiwedi kuzosetshenziswa ngokuhamba kwesikhathi ukuze ungene ngemvume kwi-portal yakho ye-inthanethi ngokusebenzisa uhlelo olusebenzayo olunjenge-PC noma i-smartphone enokuxhumeka kwe-inthanethi. Kudeshibhodi yakho yomsebenzisi oyintandokazi, uzokwenza kube lula ukufaka idijithali eyokuthatha ulandelelwano ngokusebenzisa yonke inqubo yokufaka. Qinisekisa ukuthi unedivayisi oyifisa ukufaka isofthiwe, esandleni, ngaphambi kokuthi uqhubeke nemiyalo.
Sinesixazululo salokho futhi! Vele uxhumane nethimba lethu lokusekela le-TOS futhi ubazise ngemininingwane yefoni yakho entsha. Bazohlola ifoni entsha ukuhambisana nesofthiwe bese bevala ilayisensi yakho ekhona ukuze ukwazi ukufaka ngesandla isofthiwe efonini entsha.
Cha, okwamanje i-TOS ayinikeli isici sokubheka ucingo bukhoma. Ivele ibhale izingcingo ukuthi ulalele kamuva emagcekeni.
Xhuma nathi kumapulatifomu omphakathi wezokuxhumana njenge-Facebook ne-Twitter bese uthola izibuyekezo zansuku zonke kwisofthiwe. Zonke izinguquko zivuselelwa njalo kwiwebhsayithi yethu futhi okuningi kungatholakala kusuka kubhulogi yethu equkethe ulwazi olufanele nolwazi oluhlobene nomkhiqizo wethu. Isifiso sokwengeziwe? Xoxa neqembu lethu lokusekela amakhasimende ukuze uthole usizo olwengeziwe nolwazi.
Singathanda ukuzwa kusuka kuwe!
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi isofthiwe efakiwe efonini hhayi iSIM khadi. Ngokushesha lapho ilitshe lishintsha i-SIM, uzothola isaziso sokushintsha isaziso seSIM efonini yakho. Ukuze unike amandla lesi sici, udinga ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-intanethi uphinde ungene ku-Control Center ithebhu> Izilawuli Zokuguqula> Faka Inombolo Yokuqapha. Bese ufake inombolo yakho yefoni yeselula kwifomethi yamazwe ngamazwe (isib. + 1XXXXXXXXX). Uma usuvuselele lezi zinguquko, uzothola isaziso se-SMS ngaso sonke isikhathi noma kunini ushintsho lwe-SIM kudivayisi eqondisiwe. Njengoba i-SMS izothunyelwa kusuka kwinombolo entsha yedivaysi eqondisiwe ngokwalo, ungakwazi kalula ukuphawula inombolo, ngaphandle kokubhekana nanoma yikuphi ukuhlukunyezwa.
Njengamanje, samukela izinkokhelo ngokusebenzisa izindlela ezilandelayo:
Amakhadi esikweletu (Master Card / Visa)
Ukuthengwa kuzobe kubalwe njengo- (OneSpy Shop Pvt. Ltd) futhi ngeke kukhonjwe ukuthi uthenge uhlelo lokusebenza lokuhlola.
Yebo, sinikeza ukuvikeleka okukhethekile kwe-intanethi okuthiwa yi-3D Safe. Ivikela ukuthengiswa kwekhadi lesikweletu esebenza ngeVisa noma MasterCard. Lesi sici sidinga ukuthi ufake iphasiwedi eyodwa ngesikhathi ithunyelwa kwinombolo yakho yeselula.
Le nsizakalo yezokuphepha izuze inzuzo yakho maduzane kube khona amacala amaningi mayelana nokusebenzisa kabi kwe-Credit Card. Ukuvimbela lokhu, sengeze lesi sinyathelo sokuthenga esitolo se-inthanethi kwinqubo yethu yokuthenga lapho uzocelwa ukuthi ufake ikhodi yokuphepha ukuze uqedele ukuthenga kwakho. Ibhange lakho likuthumelele i-imeyili noma i-SMS ephathelene nekhodi yokuphepha esiteji sokugcina sokuthenga lapho udinga ukungena khona ukuthenga kuyonqatshwa. Lokhu kuyadingeka ekuthengeni ngalunye, kungakhathaliseki ukuvuselelwa noma ukuthenga okusha.
Amathekisthi alahlekile kumele afaka ama-emojis noma ama-smileys futhi asiwasekeli umbhalo ohilela noma yikuphi i-emoji noma izethulo njengoba umbhalo wonke uzolahlekelwa. Sisekela kuphela umlayezo wombhalo, hhayi ama-smileys ne-emojis nanoma yiluphi uhlobo lwemiyalezo ye-MMS noma ama-Stickers.
Iwebhusayithi yethu inikwe amandla ngokuphepha kwe-3D ku-intanethi ye-intanethi. Lesi sici sikhiqiza iphasiwedi eyingqayizivele yesikhathi esisodwa esithunyelwe kwinombolo yeselula noma ikheli le-imeyili lomnikazi wekhadi lesikweletu elivumelekile. Umnikazi wekhadi lesikweletu kufanele afake iphasiwedi enikeziwe ukuqedela ukuthengiswa kwe-intanethi. Lokhu kunezela izinga elengeziwe lokuphepha ezinkokhelweni ze-intanethi ngokugwema ukuthengiswa okungagunyaziwe.
Umbuzo omuhle. Sinikeza okuhlangenwe nakho komusa lapho yonke idatha esiyiqoqa kusuka kulitshe lakho igcinwa ngokuphephile kakhulu. Akunombuzo wokuthi omunye umuntu uyakubona ngaphandle kwakho, ngaphandle kokuthi wena ngokwakho ubanikeze ukufinyelela. Asizange senze amakhulu amakhasimende ajabule nje ngokwenza lutho, uyazi.
Lutho neze. Ukuqala ngokuthi sikunikeza inombolo ephakeme kakhulu yezici ezingeni eliphezulu lokuncintisana. Ngaphezu kwalokho sineziphakheji ezihlukile ongakhetha kuzo ngokusekelwe kwesabelomali sakho.
Inqubo ilula kalula. Ungakwazi ukushaya noma yikuphi ukuthenga kwethu manje izinkinobho futhi yilokho okukhona kuwo. Isinyathelo ngasinye sichazwa kahle ngokucacile, futhi yonke inqubo izophela ngaphambi kokuthi wazi. Bheka ukuthi ungayithola kanjani ikhasi ukuze uthole olunye ulwazi.
Yilapho umlingo uqala khona. Sithumela i-imeyili eyamukelekile enemininingwane yakho yokungena ngemvume kanye nemininingwane yokuqalisa nokufaka uhlelo lakho lokusebenza. Ukukhokha kwakho kuzophinde kuqinisekiswe uma sekudlule umdayisi wethu. Kuzokuthatha isikhathi ezimbalwa emva kwalokhu ukufaka uhlelo lokusebenza bese uhlala futhi uphumule kalula.
Ngeke. Inqubo yethu yokufaka kulula kakhulu ngisho noma ugogo wakho angayilandela futhi athole umsebenzi. Ukwaziswa okwengeziwe kungatholakala ekhasini lethu lokufaka ikhasi. Ukufinyeleleka ngokomzimba: Ngingayidinga kaningi kangakanani ifoni eqondisiwe? Empeleni emva kokufaka uhlelo lokusebenza ngeke uphinde uthinte ifoni. Udinga nje imizuzu embalwa ukufaka i-TheOneSpy, yilokho, uma udinga inguqulo ehlakaniphile bese kudingeka ukuqinisekiswa.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-intanethi. I-ID nephasiwedi kufanele ibe nawe ngokusebenzisa i-imeyili yethu eyamukelekile. Yonke imininingwane kusuka efonini yakho eqondisiwe izolayishwa kuso ngezikhathi ezithile. Kuthiwani uma kunenkinga? Sitshele i-imeyili futhi sizobhekana nayo ngokushesha.
Hlola amafolda wakho ogaxekile ne-junkmail ukuze ubone ukuthi i-imeyili yethu iya lapho. Uma kungenjalo, usazise futhi sizokulungisa i-ASAP.
Yebo, ungakwazi! Ukuze ushintshe idivayisi ehlosiwe, udinga ukusetha kabusha ikhodi yokuqalisa kusuka kwipaneli yakho yokulawula. Setha kabusha ikhodi yokuqalisa iyokuvumela ukuthi usebenzise kabusha ikhodi yedivayisi yakho entsha. Ngemuva kokusetha kabusha ikhodi, vele ufake uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy efonini elisha bese usebenze uhlelo lokusebenza ngekhiye lokuqalisa elifanayo oyisebenzisayo ngaphambili.
Qaphela: Hlala ukhumbula ukuthi ukusetha kabusha ikhodi yokuqalisa kuzosusa yonke imininingwane yakho yangaphambilini kusuka kuphaneli yakho yokulawula. Ngakho qiniseka ukuthi ulondoloza yonke idatha yakho ngaphambi kokusetha kabusha ikhodi yokuqalisa.
Yebo ukusebenza komsebenzi kuthinta ibhethri uma kufakwe futhi kubuyekezwa idatha okokuqala. Njengokuqala kukhona idatha eningi, kuzokwenza ukuthi ifoni isebenzise ibhethri ngezinga elithile. I-TheneneSpy ithuthukiswa ngokusebenza kahle futhi ayivumeli amafoni adle ibhethri phambili.
Uma ungazitholi amafayela alogi olusha, yiba nesineke futhi ulinde isikhathi esithile. Awudingi ukukhipha futhi ukubuyisela i-TheOneSpy kaningi. Ukuze uthole olunye usizo lwezobuchwepheshe, kufanele uxhumane nomnyango wezinsizakalo zamakhasimende we-TheOneSpy service.
Ukukhulisa i-Digital (171)